Nandray anjara tamin’ny tetikasa tohanan’ny Rising Voices ny Sekolin’ny Asa Fanaovan-gazety An-tserasera Serba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2018 3:27 GMT
Namatsy vola hanohanana ny asa fanentanana ataon'ny Sekolin'ny Asa Fanaovan-gazety An-tserasera (pejy amin'ny teny Anglisy) ny Rising Voices. Natsangan'olom-pirenena Serba tia mampita vaovao sady bilaogera zokiolona Ljubisa Bojic tany am-piandohan'ny taona 2008 tao Belgrade ny Sekolin'ny Asa Fanaovan-gazety An-tserasera Serba. Niantso ireo manam-pahaizana momba ny media vaovao ao an-toerana toa an'i Danica Radovanovic sy Lidija Kujundzic mba hampianatra ny fototry ny fampitam-baovaon'olon-tsotra ho an'ireo Serba mpanao gazety nentim-paharazana sy olon-tsotra hafa ny sekoly.
Ireo mpandray anjara tao amin'ny Sekolin'ny Asa Fanaovan-gazety An-tserasera Serba nahazo fahaizana amin'ny Fampitam-baovao An-tserasera.
Ahafahan'ny Sekolin'ny Asa Fanaovan-gazety An-tserasera Serba mifantoka amin'ny “fampiofanana ireo mpampiofana” ny fanohanana avy amin'ny Rising Voices. Mpanao gazety sy matihanina maniry hahazo fahaizana amin'ny media vaovao ny ankamaroan'ireo mpandray anjara ao amin'ny fandaharanasa, saingy amin'ny maha-mpandray fanohanana avy amin'ny Rising Voices azy dia handrisika ny mpianany hizara ny fahaiza-manaony vaovao miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina Serba anjorom-bala, anisan'izany ny tanora jamba sy ny kamboty i Ljubisa sy ny ekipany.
Ahafahan'ny Sekolin'ny Asa Fanaovan-gazety An-tserasera Serba mividy fakantsary nomerika maromaro kokoa ary hanomezam-bola ny mpandika teny iray mba hisafidianana ny votoaty atolotr'izy ireo amin'ny teny anglisy ao amin'ny Rising Voices ihany koa ny fanohanana. Miarahaba an'i Ljubisa sy ny Sekolin'ny Asa Fanaovan-gazety An-tserasera Serbiana izahay noho ny asa mafy nataony mba handrenesana ireo feo Serba maro kokoa an-tserasera.